Ndimthini Umntu Ofuna Silale Singatshatanga?
Kutheni Ndizikhathaza Ngobuhle?
Ndinokuthetha Njani Nabazali Bam?
Ndinokukwazi Njani Ukungalandeli Oontanga?
Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokudlwengulwa?
Imiphumo yesigqibo osenzayo ngokulala nomntu ongatshatanga naye iya kuhlala nawe ubomi bakho bonke.
Khawucinge ngoku: Ziinyanga nje ezimbini uHeather noMike bethandana, kodwa kuHeather ingathi kudala besazana. Babhalelana ngefowuni, bancokola ixesha elide efowunini yaye batheth’ intw’ evanayo! Kodwa ngoku uMike ufuna okungakumbi.
Kwezi nyanga zimbini zidluleyo, uMike noHeather bebebambana nje ngezandla baze baphuzane. UHeather ebefuna nje kuphelele apho. Akafuni kwahlukana noMike. Xa ekunye naye uzibona emhle yaye ebalulekile. Uthi, ‘Mna noMike siyathandana . . . ’
Ukuba ubukwimeko kaHeather ube umdala ngokwaneleyo ukuba ungathandana, ubuza kuthini?
Ukulala nendoda okanye nomntu obhinqileyo sisipho uThixo asinike abantu abatshatileyo kuphela. Xa ulala nomntu ongatshatanga naye usisebenzisa kakubi eso sipho. Kufana nokucoca ngento enxitywayo entle oyiphiweyo
Ukuba awuwuthobeli umthetho wendalo, onjengokuba xa utsiba kumngxuma omkhulu uza kutshona, uza kwenzakala. Kuya kwenzeka okufanayo naxa ungawuthobeli umthetho wendlela ofanele uziphathe ngayo, njengalo uthi: “Nikhwebuke kuhenyuzo.”—1 Tesalonika 4:3.
Iba yintoni imiphumo yokungawuthobeli lo mthetho? IBhayibhile ithi: “Lowo uqhelisela uhenyuzo wona nxamnye nomzimba wakhe.” (1 Korinte 6:18) Ayinyaniso kangakanani la mazwi?
Abaphengululi baye bafumanisa ukuba ulutsha oluninzi oluye lwalala nomntu olungatshatanga naye lwehlelwe yenye yezi zinto zibuhlungu.
INTLUNGU ENGANYAMEZELEKIYO. Ulutsha oluninzi oluye lwalala nomntu olungatshatanga naye luye lwazisola emva koko.
UKUNGATHEMBANI. Emva kokuba umfana elele nentombi, ngamnye kubo uye azibuze, ‘Ngubani omnye akhe walala naye?’
UKUDANA. Amantombazana ebenokufuna ukuthandana nomntu oza kuwakhusela, hayi oza kudlala ngawo. Bona abafana abaninzi baye baphelelwe ngumdla kwintombazana evuma lula xa befuna ukulala nayo.
Nantsi eyona nto ibalulekileyo: Ukuba ulala nomntu ongatshatanga naye, uya kulahlekelwa yeyona nto ibalulekileyo, nto leyo eya kubangela ihlazo. (Roma 1:24) Umzimba wakho uxabiseke gqitha ukuba ungasuka nje uphise ngawo!
Zibonakalise ukuba uzimisele ukuthobela umthetho kaThixo othi “nikhwebuke kuhenyuzo.” (1 Tesalonika 4:3) Ngenye imini uya kutshata, uze ulale nomyeni okanye nenkosikazi yakho. Niya kulala nonwabile, ningenaxhala kwaye ningazisoli, nto leyo engenzekiyo xa abantu abangatshatanga belele kunye.—IMizekeliso 7:22, 23; 1 Korinte 7:3.
Ngaba umntu okuthanda ngokwenene angayibeka engozini ngolo hlobo impilo yakho neemvakalelo zakho?
Ngaba umntu okukhathalele nyhani angakwenza wonakalise ubuhlobo bakho noThixo?—Hebhere 13:4.
Abafana abaninzi bathi abasoze batshate nentombazana abakhe balala nayo. Kutheni? Kungenxa yokuba bafuna intombazana engazange yalala namntu!
Ngaba iyakothusa—mhlawumbi ide ikucaphukise loo nto? Khumbula: Kwiimuvi nakwiTV kubalaseliswa indlela ekumnandi ngayo ukulalana kwabantu abafikisayo kuze kwenziwe kubonakale ngathi akuyongozi yaye luthando lokwenene.
Ungalahekiswa! Umntu okucengela ukuba ulale naye ningatshatanga wenzela nje isiqu sakhe.—1 Korinte 13:4, 5.
Ukuba uyathandana, zibuze, ‘Ngaba ndiyikhathalele ngokwenene intombi endithandana nayo?’ Ukuba uthi ewe, unokukubonisa njani oko? Ngokubambelela ngokuqinileyo kwimithetho kaThixo, ngokuba nobulumko bokuphepha iimeko ezinokunibeka esilingweni nangokuyithanda ngendlela yokuba unganyanzelisi ukwenza izinto ezifunwa nguwe kuphela.
Ukuba ungumntu onjalo, kusenokwenzeka ukuba loo ntombi uthandana nayo izive ngendlela efanayo neyomShulami owayeziphethe kakuhle owathi: “Isithandwa sam sesam yaye nam ndingowaso.” (INgoma yazo iiNgoma 2:16) Lilonke iya kukuthanda nangakumbi!
Ukuba umntu ukucengela ukuba ulale naye esithi, “Ukuba uyandithanda masilale,” ngesibindi yithi, “Nawe ukuba ubundithanda ubungasoze uthi mandilale nawe!”
Xa ucinga ngendlela omele uziphathe ngayo xa ukunye nomfana okanye intombazana, nantsi into omele uyikhumbule: Ukuba yinto obungenakuyenza phambi kwabazali bakho, akumele uyenze.
Uza kuthini xa umntu ekucela ukuba ulale naye?
Ziintoni ezinokwenza kube nzima ukuthi hayi?
Ungaziphepha njani ezo zinto?
Indlela Yokuchaza Iinkolelo Zakho Ngokulalana